Amnesty International oo Dowladda Federaalka ka dalbatay inay sii deyso Wariye Abuja | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Amnesty International oo Dowladda Federaalka ka dalbatay inay sii deyso Wariye Abuja
Hay’adda Amnesty International ayaa waxay Dowladda Federaalka ka dalbatay in si sharuud la’aan ahi ku sii deyso Wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur (Abuja), oo billihii ugu dambeeyay ku xirnaa Magaalada Muqdisho.Hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ayaa waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay sii xirnaanshaha Wariyaha, iyadoo aan weli si daahfuran loo horkeenin sharciga.
Wariyaha oo ahaa Tafaftirihii Radio Hiigsi ayaa Magaalada Muqdisho lagu xiray 29-kii bishii February, waxaana la sii daayay 2-dii bishii March, hadana waxaa dib loo soo xiray isla 7-dii bishii March.
Aabaha dhalay Saxafiga ayaa Hay’adda Amnesty International u sheegay in si guracan loola dhaqmay wiilkiisa, mudada uu ku xiran yahay xabsiga ku yaala Caasimadda Muqdisho.
Hay’adda Amnesty International ayaa Saraakiisha Hay’adda NISA ku eedeysay in sifo aan sharci ahayn ku soo xireen Wariyaha, isla-markaana uu haataan halis ugu jiro inuu ku dhaco xanuunka COVID-19, maadaama ay maxaabiis fara-badan buux dhaafsheen Xabsiga Dhexe ee Xamar.
“Abuja waxaa dib u xiray Saraakiil ka tirsan NISA 7-dii bishii March, 2020. waxaana lagu qabtay isgaarsiin la’aan, xilli aan marin loo helin qoyska iyo qareenada oo aan maxkamad la soo taagin illaa 7-dii bishii June, 2020. Maalintaas ayaa si qarsoodi ah loo horgeeyay Maxkamad Militari oo ku taala Magaalada Muqdisho, iyadoo aan la ogeysiinin qoyskiisa iyo qareenkiisaba. Sida uu sheegay qareenkiisa, Saxafiga si rasmi ah looguma maxkamadeyn Maxkamadda Militariga, waxayna Saraakiisha NISA codsadeen waqti dheeri ah, si ay u soo geba-gabeeyaan baaritaanada. Maxakamada Militariga ayaa amartay in Saxafiga loo wareejiyo Xabsiga Dhexe ee Xamar, oo uu weli ku xiran yahay. Qareenkiisa ayaa markii ugu horeysay la kulmay 8-dii bishii June, 2020, isaga oo ku jira Xabsiga Dhexe ee Xamar.” Ayay tiri Amnesty International.
Amnesty International ayaa tiri “Ka dib markii ay ka caroodeen warbaahinta bulshada iyo mudaaharaad ay Saxafiyiinta ka sameeyeen Caasimadda Muqdisho, kuna saabsan sii xirnaanshaha Wariyaha ayay Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska soo saartay bayaan 22-ka bishii April, 2020, iyadoo ku andacoonaysa in Wariyaha ay xireen hay’adaha amniga, isla-markaana ay baarayaan xubinimadiisa Al Shabaab iyo dil.”
Amnesty International ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 3-dii bishii May si cad u sheegay in dib u habayn lagu samayn doono xeerka loo adeegsado ciqaabta Wariye-yaasha, isla-markaana uu taageeri doono xuquuqda xorriyadda iyo in la xukumo Saxafiyiinta, si loo soo geba-gabeeyo sii socoshada xariga Saxafiyiinta, iyadoo aan la xukumin. Sii xirnaanshaha Wariye Abujana uu xadgudub ku yahay ballanqaadkii Madaxweynaha.
Hay’adda xuquuqda aadanaha ayaa waxay warkooda ku soo gunaanuday “Dowladda Somaliya waxay ku khasban tahay labadaba sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo qaanuunkooda gudaha in ay ixtiraamaan, ilaaliyaan, horumariyaan oo ay fuliyaan xuquuqul insaanka, oo ay ku jirto xuquuqda xorriyadda hadalka iyo xorriyadda Saxaafadda. Saxafiyiinta madaxabannaan sida Abuja waxay door muhiim ah ka cayaaraan ku wargalinta dadweynaha wixii ku saabsan siyaasadaha dowladda iyo dabool ka qaadidda ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo xadgudubyada kale. Waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo oo aan lagu bar tilmaameedsan xarig iyo qaabab kale oo dhibaateen iyo cabsi gelin lehba.”
Amnesty International oo Dowladda Federaalka ka dalbatay inay sii deyso Wariye Abuja was last modified: July 4th, 2020 by Admin
Qarax weyn oo goor dhow ka dhacay Muqdisho
Bomb attack hits Mogadishu sea port
Maamulka Galmudug oo beenisay in la isku mari la’yahay shirka Dhuusomareeb
Akhriso:-Khudbadihii Musharixiinta guddoonka Baarlamaanka oo la soo gaba gabeyay
Dhageyso:-Shir Lagu Bareyey Bulshada Reer Kgs Maamul Wanaaga ayaa ka dhacay Magalada Baydhabo